हट लाइन सेवामार्फत सबै रोगको उपचार | Janaandolan
Home शिक्षा हट लाइन सेवामार्फत सबै रोगको उपचार
हट लाइन सेवामार्फत सबै रोगको उपचार
धरान ११ चैत्र । कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन स्वास्थ्य संस्थाहरुले ओपिडी सेवा बन्द गरेसगै सामान्य विरामीहरुलाई उपचार तथा परामर्स दिन चिकित्सकहरुको संस्था हातेमालो फाउन्डेसनले हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ ।
हटलाईनमा आएका समस्या फोनबाटै गर्ने र परामर्शबाट नभए घर सम्म पुगेरै भएपनि उपचार गर्ने उद्देश्यले हटलाईन सेवा सुरु गरेको फाउण्डेसनले जनाएको छ ।
धरानमा रहेका चिकित्सकहरुको संस्था फाउन्डेशनले विगतमा समेत उपचारको पहुँच नपुगेका ठाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्दै आएको थियो । अहिले फेरि फाउन्डेसनले संक्रमणको महामारीका समयमा अस्पताल समेत लकडाउनको अवस्था भइरहेकोले सर्वसाधारणको उपचारमा सहजता अपनाउन सर्वसुलभ उपचार गर्ने भएको हो ।
विपीमा ओपिडी लगायतका सेवा बन्दभएको र हेल्पलाइनबाट उपचार गर्ने भएपछि हातेमालो फाउन्डेशनले भने समस्या भएका विरामीको घरमै गएर उपचार गर्ने भएको छ । फाउण्डेसनले प्रत्येक समस्याका लागी अलग अलग हटलाईन नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै फेसबुकमा हातेमालो फाउण्डेसनको पेज मार्फत पनि आफ्ना समस्या राख्न सकिने र त्यहींबाट समाधान गर्ने फाउन्डेशनका प्रवक्ता डा. भुपेन्द्र साहले बताउनुभयो । उहाँले विरामीको रिपोर्ट फेसबुक म्यासेन्जरमा हाल्न लगाएर रिपोर्ट हेरेर विरामीलाई सल्लाह सुझाव दिने बताउनुभयो ।
हाडजोर्नी, दन्तचिकित्सा, मेडिसिन, सर्जिकल, लगायतका धरानका ३०÷४० जनाको चिकित्सको टोलीले यसरी सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवादिने भएको हो । फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. इन्द्र लिम्बुले कोरोना भाइरसका कारण अस्पतालमा आउन नपाएका विरामीहरुलाई घरमै गएर उपचार गराउने बताउनुभयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको चापलाई कम गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर आफूहरुले सकेसम्म सर्वसाधारणको उपचारमा संलग्नहुने निर्णय गरेको अध्यक्ष डा. लिम्बुले बताउनुभयो । सबै विभागका चिकित्सकहरु यस फाउन्डेशनमा आवद्ध भएकाले सर्वसाधारणको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, छालाको समस्या, मुटुको समस्या लगायतका यावत समस्या प्रतिष्ठानको ओपिडीको समय विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मगर्ने अध्यक्ष डा. लिम्बुले बताउनुभयो ।
Previous articleके हो लकडाउन ?
Next articleपत्रिका प्रकाशन स्थगन, विभाग काउन्सिल र महासंघमा ध्यानाकर्षण
शिक्षा हट लाइन सेवामार्फत सबै रोगको उपचार